ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် သဝန်တိုစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်လဲ … – Trend.com.mm
ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် သဝန်တိုစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်လဲ …
Posted on June 27, 2018 by Wint
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးကို သဝန်တိုတာ မဆန်းပါဘူးနော်။ တစ်ခါတစ်
လေ သူတို့က သူငယ်ချင်းပဲ ၊ ဘာစိတ်မှမရှိဘူးဆိုပေမယ့် ကိုယ့်မှာလည်း ကိုယ်ခံစားချက်နဲ့
အူတိုနေတတ်တာ အခက်သား။ ဟိုစာလေးလိုပေါ့… ” ကိုယ့်ချစ်သူ ရုပ်ဆိုးမှန်းသိပေမယ့်
စိတ်မချတာ သဘာဝပဲလေ” 😛 ဆိုသလိုပဲ။ ချစ်မိရင်တော့ စိုးရိမ်စိတ်လေးတွေ နည်းနည်း
ဘေဘီရစ်တို့ စိတ်မချ မဖြစ်ရလေအောင် အကိုတို့ကလည်း အနေထိုင်လေးတွေတော့ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်လေ။ ဒါဟာ ဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ ကိုယ်ဟာ ရည်းစားထားပြီဆိုတာနဲ့ Single လို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့မရဘူးဆိုတာ သိတယ်ဟုတ်။ သွေးသားမတော်စပ်တဲ့ သူစိမ်းနှစ်ဦး ချစ်မိကြတဲ့အခါ လိုက်နာရမယ့်အချက်လေးတွေတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါကို ယုံကြည်မှု ၊ နားလည်မှုလို့လည်းခေါ်တယ်။
မိန်းကလေးတွေကလည်း ကိုယ့်ချစ်သူ အခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ ဟေးလားဝါးလား လုပ်နေတာကို
သဝန်တိုပြချင်တယ်ဆိုရင် မကြိုက်ရင် မကြိုက်ကြောင်းပဲ တိုတိုတုတ်တုတ်ပြောလိုက်ပါ။ အရမ်းကြီးတော့ သွားမရစ်ပါနဲ့။ သူတို့လည်း မကြိုက်မှန်းသိရင်တော့ ဆင်ခြင်မှာပါ။ သတိပေးထားရဲ့သားနဲ့ ထပ်လုပ်ရင်တော့ ဒါ သူတို့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ ဒီလိုပါပဲ.. တစ်ခါတစ်လေသူတို့က စိတ်ထဲ မထင်မှတ်ထားပဲ လုပ်လိုက်ပေမယ့် ကိုယ်တွေ မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ စိတ်ထဲ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဖြစ်ရတာပေါ့။
အဲ့တော့ မိန်းမသားတွေကလည်း စိတ်ထဲသိပ်အမှတ်မထားပဲ တောင်းပန်နေရင် ကြေအေးပေး
လိုက်ပါ။ (ကိုယ်က သူ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့) ။ သင့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားဆိုရင်
မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ဆင်ခြင်မှာပါ။ အဓိက,ကတော့ အရမ်းကလေးမဆန်ပါနဲ့။ မရစ်ပါနဲ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်တွေကြီးလာတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့မရင့်ကျက်မှုတွေကြောင့် သူ့ရဲ့စိတ်အာရုံတွေ ထွေပြားလာစေမယ်။ ထစ်ခနဲရှိ စိတ်ဆိုး၊စိတ်ကောက်တွေရပ်ပြီး ထိုက်သင့်တဲ့ ယုံကြည်မှုလေးပေးပါ။ ချစ်သူအပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိရင်လည်း စိတ်အေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကွယ်ရာမှာတောင် စိတ်မချရတဲ့ ချစ်သူမျိုးကို တစ်သက်လုံး ပိုင်ဆိုင်ထားရလည်း ဘာလုပ်မှာလဲ ? စိတ်မချမ်းသာရတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပူမှန်းသိရက်နဲ့ မဖန်တီိးချင်ပါနဲ့။
ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်မကြိုက်တာကို ချစ်သူကလုပ်လာရင် မကြိုက်ရင်
မကြိုက်ကြောင်း ဒဲ့ပြောလိုက်ပါ။ လိုရင်းကို သွယ်ဝိုက်မနေပါနဲ့။ ပြီးရင် ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စကို ပြန်အစ
ဖော်မပြောပါနဲ့။ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် အပြည့်အဝယုံကြည့်နော်… ❤
မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ ကိုယျ့ခဈြသူကောငျလေးကို သဝနျတိုတာ မဆနျးပါဘူးနျော။ တဈခါတဈ
လေ သူတို့က သူငယျခငျြးပဲ ၊ ဘာစိတျမှမရှိဘူးဆိုပမေယျ့ ကိုယျ့မှာလညျး ကိုယျခံစားခကျြနဲ့
အူတိုနတေတျတာ အခကျသား။ ဟိုစာလေးလိုပေါ့… ” ကိုယျ့ခဈြသူ ရုပျဆိုးမှနျးသိပမေယျ့
စိတျမခတြာ သဘာဝပဲလေ” 😛 ဆိုသလိုပဲ။ ခဈြမိရငျတော့ စိုးရိမျစိတျလေးတှေ နညျးနညျး
ဘဘေီရဈတို့ စိတျမခြ မဖွဈရလအေောငျ အကိုတို့ကလညျး အနထေိုငျလေးတှတေော့ ဆငျခွငျသငျ့ပါတယျလေ။ ဒါဟာ ဖွဈသငျ့တဲ့ ကိစ်စတဈခုပါ။ ကိုယျဟာ ရညျးစားထားပွီဆိုတာနဲ့ Single လို လှတျလှတျလပျလပျနလေို့မရဘူးဆိုတာ သိတယျဟုတျ။ သှေးသားမတျောစပျတဲ့ သူစိမျးနှဈဦး ခဈြမိကွတဲ့အခါ လိုကျနာရမယျ့အခကျြလေးတှတေော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါကို ယုံကွညျမှု ၊ နားလညျမှုလို့လညျးချေါတယျ။
မိနျးကလေးတှကေလညျး ကိုယျ့ခဈြသူ အခွားမိနျးကလေးတှနေဲ့ ဟေးလားဝါးလား လုပျနတောကို
သဝနျတိုပွခငျြတယျဆိုရငျ မကွိုကျရငျ မကွိုကျကွောငျးပဲ တိုတိုတုတျတုတျပွောလိုကျပါ။ အရမျးကွီးတော့ သှားမရဈပါနဲ့။ သူတို့လညျး မကွိုကျမှနျးသိရငျတော့ ဆငျခွငျမှာပါ။ သတိပေးထားရဲ့သားနဲ့ ထပျလုပျရငျတော့ ဒါ သူတို့အပွဈဖွဈသှားပွီပေါ့။ ဒီလိုပါပဲ.. တဈခါတဈလသေူတို့က စိတျထဲ မထငျမှတျထားပဲ လုပျလိုကျပမေယျ့ ကိုယျတှေ မိနျးကလေးတှအေတှကျတော့ စိတျထဲ ကွိတျမနိုငျခဲမရ ဖွဈရတာပေါ့။
အဲ့တော့ မိနျးမသားတှကေလညျး စိတျထဲသိပျအမှတျမထားပဲ တောငျးပနျနရေငျ ကွအေေးပေး
လိုကျပါ။ (ကိုယျက သူ့ကိုတကယျခဈြတယျဆိုရငျပေါ့) ။ သငျ့ကို တကယျခဈြတဲ့ ယောကျြားဆိုရငျ
မကွိုကျဘူးလို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ ဆငျခွငျမှာပါ။ အဓိက,ကတော့ အရမျးကလေးမဆနျပါနဲ့။ မရဈပါနဲ့။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့အသကျတှကွေီးလာတာပါ။ ကိုယျ့ရဲ့မရငျ့ကကျြမှုတှကွေောငျ့ သူ့ရဲ့စိတျအာရုံတှေ ထှပွေားလာစမေယျ။ ထဈခနဲရှိ စိတျဆိုး၊စိတျကောကျတှရေပျပွီး ထိုကျသငျ့တဲ့ ယုံကွညျမှုလေးပေးပါ။ ခဈြသူအပျေါ ယုံကွညျမှုမရှိရငျလညျး စိတျအေးရမှာမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ကှယျရာမှာတောငျ စိတျမခရြတဲ့ ခဈြသူမြိုးကို တဈသကျလုံး ပိုငျဆိုငျထားရလညျး ဘာလုပျမှာလဲ ? စိတျမခမျြးသာရတဲ့ ဘဝတဈခုကို ပူမှနျးသိရကျနဲ့ မဖနျတီိးခငျြပါနဲ့။
ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ ကိုယျမကွိုကျတာကို ခဈြသူကလုပျလာရငျ မကွိုကျရငျ
မကွိုကျကွောငျး ဒဲ့ပွောလိုကျပါ။ လိုရငျးကို သှယျဝိုကျမနပေါနဲ့။ ပွီးရငျ ဖွဈပွီးသားကိစ်စကို ပွနျအစ
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အတူတူရှိနေသင့်တဲ့ လက်တွဲဖော်အစစ်မှန်ရဲ့လက္ခဏာတွေ